Macluumaad muhiim ah oo kaa caawin kara in aad ka badbaado xanuunka Corona |
Waxaa bilihii lasoo dhaafay dunida aad ugu baahay xanuunka Corona ee loo yaqaano Covid 19, kaas oo kumanaan dad ah ay ugu dhinteen dalalka caalamka.
Xanuunka oo dhibaatada ka dhalatay haatan dunida laga dareemayo ayaa seynisyahanada caalamka waxay sheegeen in ay adag tahay in wakhti dhaw la sameeyo daawo lagu daweyn karo xanuunka, balse waxay dhakhaatirta ku taliyeen in daweynta ay marwalba ka wanaagsan tahay kahortagga iyo sidii dadka ay isaga ilaalin lahaayeen xanuunkaas.
Dad badan oo dunida ku nool waxay aad uga walaacsan yihiin xanuunkan, waxaana la sheegay in xanuunka u aad usoo rita dadka da’da ah iyo kuwa qaba xanuunada aadka u daran sida macaanka ama sonkorta, neefta iyo xanuunada ku dhaca wadnaha. Dadkaas ayaa la sheegay inay u nugul yihiin xanuunka Corona.
Haseyeeshee arrinta ugu wanaagsan ayaa ah in qofka uu iska ilaalin karo xanuunka, haddii uu sameeyo tallaabooyinka hoos ku xusan ee ay soo jeediyeen dhakhaatiirta, seynisyahanada iyo hey’adda caafimmaadka adduunka ee WHO.
Arrintan ayay hey’adda caafimaadka adduunka ee WHO sheegtay in marka qofka uu qufaco ama uu hindishooda ay jirkiisa haddii ay ahaan lahayd sanka ama afka ay kasoo baxaan dheecaan duulduul ah, kuwaas oo laga yaabo inay sitaan xanuunka.